၈၈ ရဲ့ နော်မန်: 10/17/10 - 10/24/10
NLD YOUTH (LA) MALAYSIA ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန| မနေ့က တိုက်ခတ်သော ဂီရိ ဆိုင်ကလုန်း လမ်းကြောင်းတွင် အပျက်အစီး အများဆုံးမှာ မြေပုံ၊ ကျောက်ဖြူနှင့် မင်းပြားတို့ဖြစ်ပြီး စစ်တွေ၊ အမ်း၊ ပေါက်တော၊ မာန်အောင်တို့တွင်လည်း လေပြင်းတိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted by MoeThwayNge at 8:24 AM
ခင်မမမျိုး| ရောမရောက်လျှင် ရောမလို ကျင့်ရမည်ဟု ရှေးလူကြီးများက အဆိုအမိန့် ထားရစ်ခဲ့ကြသည်။ သို့ပေမယ့် ရောမလို ကျင့်ဖို့က ရောမ ရောက်နေမှန်း အရင်သိဖို့ လိုအပ်သည်။ ရောမရောက်နေသည့် အခြေအနေမှန်ကို လက်ခံနိုင်ဖို့ လိုအပ်သည်။ သို့မှလဲ ရောမလို ကျင့်ကြံနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သဘောင်္ပျက်၍ ကျွန်းတကျွန်းပေါ် ရောက်နေသူသည် အုန်းသီးရသည့်အခါ အုန်းရေကို မော့သောက်နိုင်ဖို့အတွက် မိမိအခြေအနေမှန်ကို သိနေဖို့ လိုအပ်သည်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်သကဲ့သို့ အုန်းရေစုပ်သောက်ရန် ပိုက်လိုက်ရှာနေလို့ မရ။ အင်္ဂလန်မှ ဟိုတယ်သို့ လာပြီး ငါးပိစားချင်တယ် ပြော၍ မရသလို၊ ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဖြင့် သွားရသည့် ရွာမှ အကောင်းဆုံး ဖျာကြမ်းလေးပေါ်တွင် ထိုင်ရင်း ဆိုဖာပေါ်ထိုင်ရရင် ကောင်းမည်လား ဟု စိတ်ကူးယဉ်နေ၍လည်း မရ။ မိမိရောက်နေသည့် နေရာ၊ မိမိရောက်နေသည့် အခြေအနေကို အမှန်အတိုင်း သိမြင်လက်ခံနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းကြရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှလဲ အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မည် ဖြစ်လေသည်။
အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါကို သိမြင်နိုင်မှုသည် လူတဦးတယောက်၏ ဘ၀ရေးရာတွင်သာ အရေးကြီးသည် မဟုတ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံ၊ လူမျိုးတမျိုး၏ ကံကြမ္မာမှသည် ကမ္ဘာ့လူသားအားလုံး၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးရာ ကိစ္စရပ်များအားလုံးတွင်ပါ အရေးပါလှသည်။ နိုင်ငံရေးတွင် များသောအားဖြင့် ခေါင်းဆောင်များ စုဝေး၍ ပါလီမန်များ၊ အစည်းအဝေးခန်းမကြီးများ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများတွင် နိုင်ငံရေးပြဿနာအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာကြလေ့ရှိသည်။ မူဝါဒများ ချမှတ်လေ့ရှိသည်။ သို့ပေမယ့် ယင်းသို့သော ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်သည် နိုင်ငံရေးအခြေအနေတိုင်းတွင် ပေါ်ထွက်သည်မဟုတ်။ ဖြစ်တည်သည် မဟုတ်။ သွေးဖြင့်၊ ချွေးဖြင့် ရင်းရသည့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေများလည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိနေစမြဲဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ ပေါ်ထွက်နိုင်ခြင်း အခြေအနေ မရှိပဲ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတခုလို တဘက်နှင့် တဘက် အကြိတ်အနိုင် စီးချင်းထိုး တိုက်ပွဲဝင်ကြရသည့် နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာများကား ကမ္ဘာ့ နေရာအနှံ့တွင် ပျံ့ကျဲ ဖြစ်တည်နေဆဲပင် ဖြစ်ပါသည်။ အရေးကြီးသည်ကတော့ မိမိရောက်ရှိနေသည့် အခြေအနေသည် တဘက်နှင့် တဘက် အပြန်အလှန်လေးစားမှု၊ တရားမျှတမှု၊ ယုံကြည်မှုတို့ဖြင့် ဆွေးနွေးနိုင်သည့် နိုင်ငံရေး စင်မြင့်များပေါ်တွင်လား (သို့မဟုတ်) တဘက်နှင့် တဘက် အပြိုင်အဆိုင် စီးချင်းထိုး တိုက်ပွဲဝင်နေရသည့် နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာတွင်လား ဆိုသည်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် သိမြင်သုံးသပ်နိုင်ဖို့ပင် ဖြစ်သည်။
ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာ တခုတွင် အောက်ပါ အခြေအနေတခု ဖြစ်ပွားနေသည် ဆိုပါစို့။
(၂) စစ်ဦးစီးအရာရှိများ ရုံးထိုင်သည့် ရှေ့တန်းရုံးရှိသည်။ အဆိုပါ ရုံးတွင် အမိန့်ပေးရမည့် commander များ ရှိသည်။ ဆက်သွယ်ရေးတပ်သားများ ရှိသည်။ သို့သော် စစ်ဆင်ရေးကို ဗျူဟာချ ဆောင်ရွက်ပေးမည့် ဗျူဟာမှူးကား မရှိ။
(၃) အဆိုပါ စစ်မျက်နှာတွင်ပင် မဟာမိတ်တပ်များလည်း ရှိသည်။ မဟာမိတ်တပ်များမှ တပ်မှူးများသည် ရှေ့တန်းရုံး၏ စစ်ရေးအရ ဦးဆောင်မှုကို ခံယူရန် ဆုံးဖြတ်ထားကြသည်။ ရှေ့တန်းရုံးမှ စစ်ဦးစီးများကို ၀န်းရံပေးရန် သဘောတူထားကြသည်။ သို့သော် ရှေ့တန်းရုံးမှ စစ်ဦးစီးတပ်မှူးများသည် မဟာမိတ်တပ်များမှ တပ်မှူးများနှင့် တယောက်တပေါက် တိုးတိုးတိတ်တိတ်သာ ဆက်သွယ်နေ ကြသည်။ မဟာမိတ် ဆက်ဆံရေးမှူးကား မရှိ။ ပျံ့ကျဲနေသော မဟာမိတ်တပ်များနှင့် တညီတညွတ်တည်း စုစည်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် စီမံချက်များအား ချမှတ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းလည်း မရှိ။ ဆက်သွယ်ရေးတပ်သားများဖြင့် လေလှိုင်းမှ တဆင့် ရှေ့တန်းရုံးမှ စစ်ဦးစီးအရာရှိများ ဘာလုပ်မည်၊ ညာလုပ်မည်ကိုသာ တယောက်တပေါက်ပြောနေကြသည်။
(၄) ရန်သူမှ တရကြမ်း ချေမှုန်းချိန်များတွင် ရှေ့တန်းရုံးရှိ စစ်ဦးစီးတပ်မှူးများက အပစ်အခတ် ရပ်စဲပေးပါရန် တောင်းဆိုခြင်း၊ ရန်သူ့လက်ထဲ ရောက်နေသော တပ်မှူးများကို လွှတ်ပေးပါရန် တောင်းဆိုခြင်းများကို ကရောသောပါး ပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည်။
(၅) စစ်ဆင်ရေးမှာ အဆုံးမသတ်နိုင်ပဲ တိုက်ပွဲများအီနေပြီး၊ စစ်ရေးကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်နေသောအခါ စိတ်မရှည်နိုင်သော မဟာမိတ်တပ်မှူးများက ထိုးစစ်များကို တတ်နိုင်သမျှ စုစည်းပြီး ဆင်နွှဲကြလေတော့သည်။ ယင်းသို့ ဆင်နွှဲသည့်အခါတွင် ရှေ့တန်းရုံးမှ စစ်ဦးစီးတပ်မှူးများက ဦးဆောင်ခြင်းလဲ မရှိ၊ ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းလဲ မရှိ၊ နောက်မှ ၀န်းရံပေးခြင်းလည်း မရှိသည့်အပြင် မိမိတို့ လက်အောက်ခံ တပ်များမှ ပါဝင်သူများကိုပင် တပ်မှ ထုတ်ပယ်အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ကြလေသည်။
(၆) မဟာမိတ်တပ်များ၏ ထိုးစစ်များ အရှိန်ကောင်းလာချိန်များတွင် ရန်သူမှ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ရှေ့တန်းရုံးသို့ အကြောင်းကြားပါတော့သည်။ ရှေ့တန်းရုံးမှလဲ အားပါတရ ထောက်ခံပြီး ရန်သူ့ လက်ထဲတွင် ကျရောက်နေသော တပ်မှူးများကို တွေ့ဆုံခွင့် တောင်းဆိုသောကြောင့်၊ ရန်သူ့လက်ထဲ ရောက်နေသော တပ်မှူးများကို ထိခိုက်လိုခြင်း မရှိသော မဟာမိတ်တပ်များမှ အရှိန်ကို ပြန်လျှော့လိုက်ရလေတော့သည်။ ယင်းသို့ အရှိန်လျော့လာသည်နှင့် တပြိုင်နက် ရန်သူတပ်များမှ မဟာမိတ်တပ်များကို တရကြမ်းတောနင်းပြီး တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းကြ ပါတော့သည်။ ရှေ့တန်းရုံးမှ စစ်ဦးစီး တပ်မှူးများကား တခွန်းတပါဒ ၀င်ပြောခြင်း မရှိ။ မိမိတို့ ရှေ့တန်းရုံးပေါ်သို့ ဗုံးဆံ ကျမည်ကိုပင် စိုးရိမ်ကာ ဗုံးခိုကျင်းများထဲသို့ ၀င်ပြီး ငုတ်တုတ် ထိုင်နေကြလေတော့သည်။
(၇) ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွင် ရန်သူကို တိုက်ရန်ဟု ရည်ရွယ်ပြီး ရှေ့တန်းရုံးမှ တပ်မှူးများ၏ ကွပ်ကဲမှု လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များသို့ ၀င်ရောက်လာသော တပ်သားများမှာကား စစ်လဲ မတိုက်ရ၊ မဟာမိတ်များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျှင်လဲ တပ်မှူးများက မကြည်မလင်ဖြစ်ကာ တပ်မှထုတ်လိုထုတ်၊ ခေါ်ယူသတိပေးလိုပေးနှင့် ဖြစ်နေပြီး၊ တနေ့ တနေ့ ခံစစ်အတွက် ကတုတ်ကျင်းတူးရန်၊ ဗုံးခိုကျင်းတူးရန် တာဝန်များကိုသာ ထမ်းဆောင်နေရသည့်သကာလ တပ်မှူးများအပေါ်တွင် စိတ်ပျက်ပြီး နှုတ်ထွက်သူကထွက်၊ တနိုင်တပိုင် အစုအဖွဲ့လေးများဖွဲ့ပြီး ရန်သူကို ပြောက်ကျားစစ်ဖြင့် တိုက်သူက တိုက်၊ ငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်သူက ကြည့်ရင်းဖြင့် အချိန်ကုန်နေကြလေသည်။
(၈) ယင်းသို့သော အခြေအနေတွင် ရန်သူ့ ဘက်မှ နေ၍ လက်နက်ချပါက ယင်းတို့ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်း လိုက်နာသူများကို ရာထူးအာဏာပေးတော့မယောင် မြူဆွယ်စည်းရုံးမှုများ ထွက်ပေါ်လာသဖြင့် ရှေ့တန်းရုံးမှ စစ်ဆင်ရေး တပ်မှူးအချို့သည် မိမိတို့ ကွပ်ကဲမှု လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းများမှ ကျဆုံးသွားသူများ၏ မျက်နှာကိုလဲ မထောက်၊ ရန်သူ့ အကျဉ်းစခန်းများတွင် ရောက်ရှိနေသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုလဲ မငဲ့ကွက်ပဲ အပြေးအလွှား သုတ်ခြေတင်ပြီး ရန်သူ့ထံ အခစားရောက်သွားကြပါလေတော့သည်။
(၉) ယင်းသို့ သပ်လျှိုဖြိုခွဲမှုများ ပြုလုပ်အပြီးတွင် ရန်သူဘက်မှနေ၍ မဟာမိတ်တပ်များကို ထိုးစစ်များဖြင့် စနစ်တကျ ချေမှုန်းမှုများ ထပ်မံ ပြုလုပ်လာသကဲ့သို့ ရှေ့တန်းရုံးတွင် ကျန်ရှိနေသော တပ်မှုးများကိုသာမက ရှေ့တန်းရုံးနှင့် လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့များကိုပါ အပြီးတိုင်ချေမှုန်းကို ထိုးစစ်များ စတင်ပြင်ဆင်လာတော့သည်။ တပြိုင်နက်တည်းတွင်ပင် ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွင် ရှိနေသော ပြည်သူလူထုမှ ရှေ့တန်းရုံးတပ်မှုးများကို ရွေးချယ်ခဲ့သည့် ရလာဒ်များအား ချေဖျက်ရန် ရွေးကောက်ပွဲအတုကို ရန်သူက ပြုလုပ်ပါလေတော့သည်။
(၁၀) အဆိုပါအခြေအနေတွင် ခေါင်းမထောင်နိုင်အောင် ချေမှုန်းခံနေရသော မဟာမိတ်တပ်မှူးများမှာလဲ ခုန်ဆွဆွ၊ စစ်မျက်နှာတွင် ရောက်ရှိနေသော လူထုမှာလဲ တပ်မှူးများ ပေးသော အမိန့်ကို နာခံရန် တကြွကြွ ဖြစ်နေကြသော်လဲ ရှေ့တန်းရုံးက တပ်မှူးများကတော့ ရန်သူ လုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲအတုကို လက်မခံကြရန် လူထုကို ပြောကြားခြင်း၊ ရှေ့တန်းရုံးကို ရန်သူဘက်မှ မချေမှုန်းစေရန် ရန်သူက ချမှတ်ထားသော ဥပဒေစည်းကမ်းများ အသုံးပြု၍ တောင်းဆိုခြင်း၊ ရန်သူ့ထံတွင် အကျဉ်းကျခံနေရသော တပ်မှူးများအား လွှတ်ပေးပါရန် တောင်းဆိုခြင်း၊ အပစ်အခတ် ရပ်ပြီး စေ့စပ်ဆွေးနွေးပါရန် ပန်ကြားခြင်းများကို ပြုလုပ်နေကြပါလေတော့သည်။
အဆိုပါ အခြေအနေများသာ ရှေ့တန်း စစ်မျက်နှာတွင် ဖြစ်ပွားနေပါက ရလာဒ်များ မည်သို့ ရှိမည်နည်း။
အထက်ပါ အခြေအနေများ၊ ရလာဒ်များသည် ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွင် ဆိုလျှင်တော့ စစ်ကြန့်ကြာခြင်းကြောင့် ရေတိုဆိုးကျိုး၊ ရေရှည်ဆိုးကျိုးခံစားရသည့် လူထုအရေအတွက်၊ တပ်မှူးတပ်သား အရေအတွက် နည်းပါးပါသည်။
လောကတွင် ကိုယ်ရောက်နေသည့် အခြေအနေကို အကဲမဖြတ်နိုင်မှုလောက် ဆိုးရွားသော အမှားအယွင်းကား မရှိနိုင်။ သင်္ဘောပျက်ပြီး ကျွန်းပေါ်တွင် ရောက်နေသူက အုန်းရည်ကို ပိုက်နှင့်မှ စုပ်သောက်ချင်နေလျှင် အချိန်ကြာလှသည့်အခါ အားပြတ်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ သေနတ်နှင့် ချိန်ထားသည့် စိတ်မနှံ့သူကို ပြန်ပစ်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးရှိပါလျှက် လူမသတ်လိုဟု ဆိုကာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အေးအေးဆေးဆေး ညှိနှိုင်းစကားပြောရအောင်ဟု ဆိုပါကလဲ စိတ်မနှံ့သူ ပစ်လိုက်သည့် ကျည်သင့်ပြီး သေဖို့ပဲ ရှိသည်။ တောရိုင်းထဲ ရောက်ပြီး၊ တောရိုင်းဥပဒေကို မကျင့်သုံးပါက အန္တရာယ်ဆိုးများ ကြုံဖို့ပဲ ရှိသည်။ စစ်မျက်နှာကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ညီလာခံလို သဘောထားပြီး စေ့စပ်ဆွေးနွေးဖို့ တောင်းဆိုနေသရွေ့ကတော့ တနေ့မဟုတ် တနေ့ ရန်သူ့ပစ်ကွင်းထဲ ရောက်မည်မှာ မုချမလွဲ။
ယင်းသို့ဆို၍ စစ်ပွဲများတွင် စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲ မရှိဟု မဆိုလိုပါ။ စေ့စပ်ဆွေးနွေးဖို့ ဆိုသည်က တဘက်နှင့်တဘက် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်နေကြသည့် ကွင်းပြင်ခေါင်ခေါင်မှာ လုပ်လို့ ရသည်မဟုတ်။ သေလုခမန်း တိုက်ပွဲဝင်နေရသည့် တပ်သားများကို ငါတို့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးဖို့ တောင်းဆိုထားတယ်ဆိုပြီး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ပြောဆိုနေရသည့် အရာမဟုတ်။ နှစ်ဘက် ခေါင်းဆောင်အချင်းချင်း ဆက်သွယ်မှု Channel များဖွင့်ပြီး၊ ပဏာမ ညှိနှိုင်းမှုများ တိုးတိုးတိတ်တိတ် လုပ်ရမည့် အရာဖြစ်သည်။ ယင်းမှ တဖန် နှစ်ဘက် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို ထပ်မံညှိနှိုင်းပြီး၊ နှစ်ဘက်စလုံးက သဘောတူညီမှုရှိမှသာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရန် စစ်မျက်နှာမှ ဗိုလ်ပါတပ်သားအပေါင်းကို အမိန့်ပေးရမည့် အရာသာ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မဟုတ်ပဲ တဘက်ရန်သူက ပဏာမညှိနှိုင်းခြင်းကို လက်ခံသည်လဲ မဟုတ်၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူသည်လဲ မဟုတ်ပဲ တရကြမ်း ချေမှုန်း နေချိန်တွင် စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲကို တောင်းဆို မျှော်လင့် နေလို့ကတော့ ရန်သူ့ အမြောက်ဆန်က ရှေ့တန်းရုံးပေါ် တည့်တည့်မတ်မတ် မကျလာလျှင်ပင် တော်သေးသည်ဟု ဆိုရလိမ့်မည် တကား။
Posted by နော်မန် at 9:51 AM
ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း | ဒီနေ့ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှာ တွေးခေါ်မှုနှစ်ရပ်နဲ့ ပဋိပက္ခကို အထင်ရှား တွေ့နေရပါတယ်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ပဋိပက္ခဆိုတာ အများကြီးရှိတာကတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အချိန်အခါလိုက်လို့ တခုသော ပဋိပက္ခဟာ အဓိက ရှေ့တန်းရောက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ တရားပါ။ အခုလည်း မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေး တွေးခေါ်မှုတွေထဲမှာ အဓိက ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေထဲမှာ စစ်အုပ်စုအုပ်စိုးမှုအောက်မှာ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရင်း တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ တွေးခေါ်မှုနဲ့ စစ်အုပ်စုအုပ်စိုးမှုအောက်မှာ ဆက်ပြီး သွားနေလို့ကတော့ တိုင်းပြည်ဟာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ တွေးခေါ်မှုတို့ရဲ့ ပဋိပက္ခဟာ အဓိက ဆုံချက်ဖြစ်ပါတယ်။
မှန်ပါတယ်။ ဒီနေ့တည်ရှိနေတဲ့ ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ အထက်မှာပြောဆိုခဲ့တဲ့ စကားလုံးတွေအတိုင်း ဒီအတွေးအခေါ်တွေကို ဖော်ပြတာ၊ ပြောဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်နည်းနဲ့ကိုယ် ဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့က ဒီအတိုင်း တိုက်ရိုက်ပြောမယ်၊ တချို့က ကွေ့ပတ်ပြောမယ်၊ တချို့က သကာလူးပြီးပြောမယ်၊ တချို့က စောင်းပါးရိပ်ခြေပြောမယ်။ အလားတူပဲ နအဖစစ်အစိုးရရဲ့ ဒီမိုကရေစီအောက်မှာ ဒုတိယအမျိုးအစား အတွေးအခေါ် ရှိသူတွေကတော့ ကိုယ့်အနေအထားနဲ့ကိုယ် သတိထားပြောကြရပါတယ်။ သဘာဝကျစွာပဲ ပြည်တွင်းမှာနေသူနဲ့ ပြည်ပမှာနေသူတို့ဟာလည်း ပြောကြားပုံ၊ တင်ပြပုံတွေ ခြားနားကြပါတယ်။
စစ်အစိုးရလက်အောက်မှာ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရင်း တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်သွားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ တွေးခေါ်နည်းကို ကိုင်စွဲထားသူတွေထဲမှာ “အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမှာ တပ်မတော်၏ဦးဆောင်မှုအခန်း” ဆိုတာကို တင်နေကြသူတွေ၊ “၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ ဒီမိုကရေစီအတွက် အာမခံချက်တွေ အပြည့်အစုံ မပါပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းချင်း ပြုပြင်ယူသွားမယ်” လို့ဆိုသူတွေ၊ “ခြေတလှမ်းရရ၊ နှစ်လှမ်းရရ ယူထားရမယ်” လို့ ဆိုသူတွေ၊ “ဒီအချိန်မှာ လူထုတိုက်ပွဲစကားပြောသူတွေဟာ မိုက်ရူးရဲတွေ၊ နိုင်ငံရေးသူငယ်နာ မစင်သူတွေ” လို့ ပြောနေသူတွေ၊ “အခြားအစားထိုးစရာ နည်းလမ်းတွေမရှိဘဲ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ခြင်းသည် လေလုံးထွားခြင်းသာဖြစ်သည်” လို့ဆိုသူတွေ၊ လေမတူသော်လည်း အခြေခံစိတ်သဘောထားတူသူတွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စိတ်သဘောထားဆိုတာက လာတော့မယ့်ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံတာကို ဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။
တဖက်မှာကတော့ နအဖ ဒီလိုလုပ်နေပုံမျိုးကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဆိုတာရဲ့ အောက်မှာဖြစ်စေ၊ ရွေးကောက်ပွဲက တဆင့်ပဲဖြစ်စေ၊ တခြားဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားတာကို ဆန့်ကျင်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို စစ်အုပ်စုရဲ့ အရိပ်သြဇာအောက်က လုံးဝလွတ်ကင်းတဲ့ အစိုးရတရပ် ပေါ်ထွက်ရေးအတွက် လုံးပန်းရမယ်လို့ဆိုသူတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကို ပြည်ပမှာ နေထိုင်သူတွေသာ ဒီအတိုင်းတိုက်ရိုက် ပြောဆိုနိုင်ကြပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့လူတွေကတော့ အမြီးရှိတဲ့လူတွေ ရိပ်မိကြနော်ဆိုတာမျိုးလောက်ပဲ အလွန်ဆုံးပြောနိုင်ပါတယ်။
အခုတင်ပြနေတာဟာ တွေးခေါ်မှုပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်အယူအဆတခုကိစ္စကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ဟာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အယူအဆအားလုံးတို့ရဲ့ အခြေခံ အစပြုရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူရဲ့ တွေးခေါ်မှုဆိုတာ သူချည်းသီးခြား တည်ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ခံသမိုင်း၊ မြစ်ဖျားခံရာ စသဖြင့် ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ အဲဒီအထိ တင်ပြဆွေးနွေးဖို့ မသင့်သေးဘူးထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေကိုပဲ တင်ပြသွားပါမယ်။
ဒီတွေးခေါ်မှုနှစ်မျိုးရဲ့ ဆုံချက်နေရာဟာ နအဖရဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပြီး အယူအဆအရ အခြေခံအားဖြင့် ညှိမရတာဟာ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးမှာ စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ဒီနေ့ နိုင်ငံရေးရဲ့စံ၊ မှတ်ကျောက်လို့ ဆိုရင် မမှားဘူးထင်ပါတယ်။
အခုအခါမှာ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်စေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းဖြစ်စေ နိုင်ငံရေးစကားတွေ ဝေအောင်ပြောနေကြပါတယ်။ လူကြားကောင်းမယ့် ဝေါဟာရမှန်သမျှလိုလိုကို အသုံးပြုနေကြတာပါ။ “တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး” စတာတွေကို လိုလားထောက်ခံပါကြောင်း အဖွဲ့အစည်းတိုင်း၊ လူတိုင်းလိုလိုပဲ ပြောကြရေးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအသံရှင်တွေကို အထက်က စံ-မှတ်ကျောက်နဲ့ တင်ကြည့်လိုက်ရင် ဘီလူးစည်း လူ့စည်း ကွဲသွားတာ တွေ့ရပါမယ်။ အဲဒီကိစ္စတွေအပေါ် ဘယ်လိုသဘောထားသလဲလို့ ဖြေခိုင်းလိုက်ရင် ရပ်တည်ချက်အမှန်ဟာ ပေါ်ထွက်လာမှာပါ။
မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးမှာက နိုင်ငံရေးဝေါဟာရတွေကို လက်တလုံးခြားအသုံးချကြတဲ့ အစဉ်အလာသာမက လူနာမည်၊ အမှတ်အသားစတာတွေကိုလည်း ကိုယ့်အတွက်၊ ကိုယ့်ပါတီအတွက် အသုံးချလေ့ရှိတာဟာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းကလို့ ဆိုရမလိုပါပဲ။ ဖဆပလတွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာ မဲပုံးပေါ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံကို တင်ထားပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံကို အသုံးချပြီး မဲတောင်းတာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ အဲဒီတုန်းက သင်္ကြန်တခုမှာ သံချပ်ထိုးကြတော့ “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သနားစရာ-သူ့ခမျာ မဲပုံးတံဆိပ်” လို့ အော်တာ ကြားခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အလားတူပဲ ဒီတခါ နအဖရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ခမောက်တံဆိပ်ကို မောင်ပိုင်စီးချင်တာ၊ မြန်မာတမျိုးသားလုံးက ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ခွပ်ဒေါင်းအလံကိုတောင်မှ ကိုယ်မဲရရေးအတွက် မဲပုံးတံဆိပ်အဖြစ် အသုံးချချင်တာ စတဲ့ မရိုးသားတဲ့ ကြံစည်မှုတွေကို တွေ့ရတယ်မဟုတ်ပါလား။ ဒါတင်မက တချို့ဆိုရင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ပြီးတာတောင်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နာမည်နဲ့ဂုဏ်ကို အသုံးချနိုင်အောင် ပြောဆိုနေတာလည်း ကြားရပါတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ဘာသာသူတို့ ဘာခမောက်ပဲဆောင်းဆောင်း၊ ဘာအလံပဲထူထူ အထက်ကကိစ္စတွေအပေါ် ဘယ်လိုသဘောထားသလဲလို့ မေးလိုက်ရင် သဲကွဲသွားမှာပါ။
ထပ်ပြောပါမယ်။ ပထမအမျိုးအစားတွေးခေါ်မှုကို နအဖစစ်အုပ်စုထိပ်သီးတွေက လက်ခံသဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယအမျိုးအစားတွေးခေါ်မှုကိုတော့ သူတို့က အကြီးအကျယ် မုန်းတီးဆန့်ကျင်ပါတယ်။ ဒီလို နအဖထိပ်သီးတွေရဲ့ သဘောထားကိုက ဒီ စံ၊ မှတ်ကျောက်ကို အတည်ပြုနေတာလို့ပြောရင် ရမယ်ထင်ပါတယ်။
စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာက ပထမအမျိုးအစား တွေးခေါ်မှုရှိသူတချို့က ဒီနေ့နိုင်ငံရေးမှာ ပြည်သူလူထုကို လိမ်လို့ရနိုင်မယ်လို့ ထင်နေကြတာပါပဲ။ လိမ်လို့မရမှန်း သူတို့သိတဲ့အခါကျတော့ ကိစ္စတွေက နောက်ကျ ကုန်ပြီဆိုတာကို တွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။
RFA | နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့မှာ စစ်အစိုးရ ကျင်းပမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မြို့နယ်မှာ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား လူအင်အား ၅၀၀ ကျော်လောက် ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက် မနက်ပိုင်းက စုရုံး ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့ အဲဒီ ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်သူ ကိုစောထူးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက်ပြီးတော့ ပြမယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တခုပြီးတခုပေါ့နော်။ ပြည်သူလူထုကလည်း ဒီ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ဒီ နအဖ ရွေးကောက်ပွဲကို လုံးဝ အယုံအကြည် မရှိဘူးလေ။ နောက်ပြီးတော့ ဒီ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေလည်း ဘယ်သူမှ လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်၊ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေက ကျွန်တော်တို့ လှုပ်ရှားခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဆက်လက် လုပ်သွားပါမယ်။”
Category II အဆင့်ရှိ အားကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး ရခိုင်ပြည်နယ် အလယ်ပိုင်းကို စတင်ဖြတ်ကျော်ပြီ
(၂၂-၁၀-၂၀၁၀ ရက် နံနက် (၇;၄၅)နာရီ အချိန် ထုတ်ပြန်ချက်)
ပုံကိုနှိပ်ပြီး အကြီးချဲ့ကြည့်ပါ ...
04B GIRI တစ်နာရီမိုင်(၈၀)ကျော်တိုက်ခတ်တဲ့ Categoey II အဆင့်ရှိ အားကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်သွားပြီ။
ဒီကနေ့ မနက်ကဖြစ်နေခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မုန်တိုင်းငယ်ဟာ ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး ဒီနေ့ ည(၉)နာရီခွဲအချိန်မှာ မုန်တိုင်းမျက်စိပေါ်တဲ့အဆင့်ရှိတဲ့ အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ လေတိုက်နှုန်းတစ်နာရီ (၇၅)မိုင် အထိရှိနိုင်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ အဆင့်ရောက်နေပါပြီ။ လေသာမက အထူးသဖြင့် ရေတက်ပါတော့မယ်။
အခုမုန်တိုင်းကို မနက်ဖန် (၂၂-၁၀-၂၀၁၀)ရက်နေ့ နေ့ခင်းပိုင်းကစပြီး သတိထားရပါ့မယ်။ ညနေ(၃)နာရီလောက်စပြီး ဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။ ဖြတ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းးတဲ့နေရာက ကျောက်ဖြူမြို့အနီးက ဖြစ်ပါ့မယ်။(အမြဲ Update လုပ်ပါ့မယ်။)
ရေက မုန်တိုင်းဖြတ်မယ့်နေရာ(ဆိုပါစို့ လောလောဆယ် ကျောက်ဖြူပေါ့ဗျာ)ရဲ့ အောက်ဖက် (မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းကို မျက်နှာမူရင် ညာဖက်ခြမ်း)မှာ ရေတွေတက်ပါ့မယ်။ မုန်တိုင်းဖြတ်တဲ့ နေရာရဲ့အောက် မိုင်(၂၀-၃၀)အတွင်း အဆိုးဆုံးဖြစ်ပါ့မယ်။ လက်ရှိလေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ(၇၅)မိုင် နဲ့ဆိုရင် (၅)ပေမှ (၆)ပေ လောက်အများဆုံးပါဘဲ။ ရေက လေတိုက်နှုန်း မိုင်(၁၀၀)ကျော်မှ အလွန်ဆိုးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ရခိုင်ကကမ်းရိုးတန်း ရေနက်တော့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် လောက်ရေအတက် မကြမ်းပါဘူး။ သတိရှိပါ။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ ကမ်းပေါ်တွင်နေထိုင်ပါ။ ခိုင်ခံသောအဆောက်အဦတွင်ခိုလှုံပါ။
၂၂-၁၀-၂၀၁၀ နံနပ်ပိုင်းကစပြီး မုန်တိုင်စက်ကွက်းထဲရောက်ပါလိမ့်မယ်။ လေစတိုက်မယ်။ အပြင်းဆုံးလေက ဗစိုချက်နားရှိတာမို့ ဒီလေကိုတော့ နေ့ခင်းပိုင်းလောက်မှ ကြုံနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လှိုင်းကြီးနိုင်တာကြောင့် ရေထဲကိုတော့ ရှောင်စေချင်ပါတယ်။ မုန်တိုင်းဒီရေတက်တာ နည်းနိုင်ပါတယ်။
တစ်နာရီ(၇၅)မိုင်နှုန်းတိုက်တဲ့လေဟာ ရေပြင်၊မြေပြင်တွေအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်အထိ ပျက်စီးစေနိုင်တယ် ဆိုတာကို မှန်းဆနိုင်ဖို့ Web Page တစ်ခုတင်ထားပေးပါတယ်။ တစ်နာရီ လေတိုက်နှုန်း(၇၅)မိုင်ဆိုတာ လှိုင်းကြီးနိုင်တယ်၊ အဆောက်အဦတွေပျက်စီးနိုင်တယ်၊ သစ်ပင်တွေဓါတ်တိုင်တွေ ပြိုလဲနိုင်ပါတယ်။
(၂) မုန်တိုင်းဒီရေဆိုးဆိုးဝါးဝါးမရှိနိုင်လို့ ကမ်းပေါ်မှာနေရင် လုံခြုံနိုင်ပါတယ်။
(၃) ခိုင်ခံ့တဲ့ အဆောက်အဦးတွေမှာ ခိုလှုံနေထိုင်ပါ။
၂၂-၁၀-၂၀၁၀ မနက်ကတည်းက မုန်တိုင်းရဲ့ စက်ကွင်းဖြတ်နေပြီမို့ လေတွေမိုးတွေစပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဗဟိုချက်က ပင်လယ်ထဲမှာဘဲရှိပါလိမ့်မယ်။ တစ်နာရီ (၇၅-၈၀)မိုင် လေတိုက်နှုန်းကလည်း အဲဒီဗဟိုချက်ဖြတ်မှာတိုက်မှာပါ။ နေ့လည်လောက်ဆိုရင် စမယ်လို့ မှန်းပါတယ်။ ညနေ(၆)နာရီခွဲလောက် ဆိုရင် ကုန်းထဲရောက်သွားပါပြီ။ အဲ.. ကုန်းထဲရောက်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ရက်လောက် (၂၃-၁၀-၂၀၁၀)ညနေအထိ ရှိနေဦးမှာမို့ ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသတွေ (မကွေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း)မှာ မိုးတော့ရွာဦးမယ်လို့ ခန့်မှန်းကြောင်းပါဗျာ။
တက်လူ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် လုံခြုံရေး အတွင်းစည်း အပြင်စည်းများ ချထားကြောင်း ပြည်ထဲရေး (ရန်ကုန်ရုံး) မှ ရဲအရာထမ်းတဦးက ပြောသည်။
“အပြင်စည်း အတွင်းစည်း ဆိုတာကတော့ စစ်တပ်သုံးစကားပဲ။ အခုချတဲ့လုံခြုံရေးက ရဲရော၊ စစ်သားရော ချတာ။ အရင်ကဆို နေ့ဘက်မှာ ရဲလုံခြုံရေးချတာ။ အခုက ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ပြဿနာတွေဖြစ်မှာစိုးလို့ ရဲရော၊ စစ်သားရော လုံခြုံရေးချတာ။ တပ်မ(၇၇) ကလည်းပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ညဘက်ထွက်သူများအား ယခင်ထက်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်း၌ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် ညမထွက်ရ အမိန့်များထုတ်ပြန်ထားပြီး ဧည့်စာရင်းကို တင်းကျပ်စွာ စစ်ဆေးကြောင်း မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ခေမာသီလမ်းနေ ပြည်သူတဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရွှေပေါက္ကံမြို့နယ်၌ ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလအတွင်းက ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေး စာရွက်စာတမ်းများ ဖြန့်ဝေသည့်ကျောင်းသားများ အဖမ်းခံရပြီးသည့်နောက် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ကို ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ရွှေပေါက္ကံက မြောက်ဥက္ကလာပ အပိုင်ဖြစ်တယ်လေ၊ အဲဒါကြောင့် ဆက်စပ်ပြီးတော့ ညမထွက်ရဆိုတာ လုပ်လိုက်တာဖြစ်မယ်၊ ကျန်တဲ့ မြို့နယ်တွေတော့ ညမထွက်ရဘူးဆိုတာ မကြားမိဘူး” ဟု မြောက်ဥက္ကလာ (ည)ရပ်ကွက်သားတဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ်အလိုက် အဓိက လမ်းမကြီးများတွင် နေ့ဘက်၌ ရဲ အနည်းဆုံး (၂) ဦး မှ (၅) ဦးအထိ အစောင့်ချထားပြီး ညပိုင်း၌ လမ်းဆုံလမ်းခွများ၊ မီးပွိင့်များတွင် ယာဉ်အသွားအလာမှအစ လုံခြုံရေးအရ စစ်ဆေးမှုများ တင်းကျပ်စွာ လုပ်နေကြောင်း တက္ကစီယာဉ်မောင်းတဦးက ပြောသည်။
“ စီးပွားရှာရတာ မလွယ်ပါဘူးဗျာ။ မောင်းမကောင်းရတဲ့ကြားထဲ စစ်ဆေးရေးတွေက တမှောင့်ဖြစ်နေတယ်။ လမ်းတွေမှာ သံဆူးကြိုးတွေ ချပြီးတော့ (၄) လမ်းသွားဆိုရင် ဟိုဘက်တလမ်းပိတ် ဒီဘက်တလမ်းပိတ်ပြီးတော့ စစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ယာဉ်ကြောကြပ်တယ်၊ ကြာတာပေါ့။ ခရီးမတွင်ဘူးလေဗျာ။ စစ်တာတွေကတော့ မီးသတ်ပါတယ်၊ အရပ်ဝတ်နဲ့ ရယက တွေပါတယ်၊ ရဲပါတယ်။ အခုတလော များလာတယ်ဗျ” ဟု တောင်ဥက္ကလာပမှ အငှားယာဉ်မောင်းတဦးက ပြောသည်။
နအဖ သည် ယခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကို လာမည့်နိုဝင်ဘာ (၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဟု ကြေညာထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ဆူပူမှုများဖြစ်ပေါ်မည်ကို အလွန်စိုးရိမ်နေကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှ အရာထမ်းတဦးထံမှ သိရသည်။
၎င်းက “အစိုးရအနေနဲ့ ၂၀၀၈ တုန်းကလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုတဲ့အခါ မဖြစ်မနေလုပ်သွားခဲ့တယ်။ အခုလည်း သူတို့ကရွေးကောက်ပွဲကို မဖြစ်မနေလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့အတွက် အပျက်ဖြစ်သွားမှာကို မလိုလားဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အစစအရာရာ လုံခြုံရေးချထားတာဖြစ်တယ်။ ဒီလဆန်းက စပြီးတော့ အရင်ထက် လုံခြုံရေး တိုးလိုက်တယ်” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ အထူးကိုယ်စားလှယ်တင်ပြ
RFA | မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ် ကင်တားနား က စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေ၊ ဖမ်းဆီးထောင်ချ တာတွေ၊ သတ်ဖြတ်တာတွေ၊ အဓမ္မလုပ်အားပေး ခိုင်းစေတာတွေ ပိုပြီး များလာတာ တွေ့ရတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂမှာ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေအတိုင်းဆိုရင် စစ်မှန်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်နိုင်ခြေ အတော့်ကို နည်းပါးနေတာ တွေ့ရတယ်လို့ မစ္စတာ ကင်တားနားက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို အာဏာပိုင်တွေက နှောင့်ယှက်နေတာတွေ၊ ခြိ်မ်းခြောက်နေတာတွေလည်း ရှိနေတယ်လို့ မစ္စတာ ကင်တားနားက ထပ်လောင်း ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မစ္စတာကင်တားနားရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူပေါင်း ၂၁၀၀ ဝန်းကျင်ရှိပြီး၊ ၁၉၈၈ ကနေ အခုချိန်ထိ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ သေဆုံးသွားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စုစုပေါင်း ၁၄၄ ဦး ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိကာလမှာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားက စုစုပေါင်း ၁၃၈ ဦး ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအစီရင်ခံစာမှာ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းထားသူတွေကို စိတ်ပိုင်း-ရုပ်ပိုင်း နှစ်မျိုးစလုံးရော၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပါ စနစ်တကျ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာကို တိုက်ရိုက် သက်သေ ထွက်ဆိုချက်တွေနဲ့ ရေးသားထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မစ္စတာကင်တားနား က ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေက ကျေးလက်နေ ပြည်သူတွေ သိန်းချီပြီး ပြည်တွင်း စစ်ပြေးဒုက္ခသည်အဖြစ် တောထဲ တောင်ထဲ ပုန်းအောင်း နေထိုင် ရတာတွေကိုလည်း တင်ပြထားပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်ကလည်း မစ္စတာကင်တားနားရဲ့ အစီရင်ခံစာကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြန်လည်ချေပ လိုက်ပါတယ်။ သူက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူတွေ မရှိဘူးလို့လည်း ထပ်မံ ပြောကြားသွားပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အလံသစ်တင်ပြီး အလံဟောင်းကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးမည်
ဧရာဝတီ | လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော နိုင်ငံတော်အလံကို ယနေ့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမည် ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတွင် ပါရှိသော နိုင်ငံတော် အလံသစ်ဖြင့် ယတြာ သဘောအရ စတင် အစားထိုးပြောင်းလဲ အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော် စစ်အရာရှိ အသိုင်းအဝန်းက ဆိုသည်။
အလံဟောင်းများကို တပြိုင်နက်တည်း မီးရှို့ဖျက်ဆီးကာ မြေမြှုပ်မည် ဖြစ်သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်မှ အစိုးရ သစ်တောအရာရှိ တဦးကိုလည်း အလံသစ်တင် အခမ်းအနားအတွက် ဖိတ်ကြားထားသည်ဟု ပြောဆိုသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပသည့် နေ့မှစ၍ အာဏာတည်မည်ဖြစ်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ အလံသစ်ကိုလည်း ယင်းနေ့တွင်မှ စတင်ပြောင်းလဲ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးသမားတဦးက ရှင်းပြသည်။
“ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အာဏာတည်မှ အလံပြောင်းလို့ရမှာ။ အခု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အာဏာမတည်ခင် ဗေဒင်သဘောနဲ့ အလံပြောင်းတာက သူတို့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ ဥပဒေသူတို့ ချိုးဖောက်တာပါပဲ။ အလံတခု ပြောင်းလို့လည်း ကိုယ်ပြုထားတဲ့ မကောင်းမှု အကုသိုလ်တွေ ကွယ်ပျောက် မသွားပါဘူး” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ယနေ့ ညနေ ၃ နာရီခွဲ ခန့်က ရန်ကုန်မြို့တော် ခန်းမ၌ တင်လိုက်သည့် အလံသစ်
အသစ်ပြောင်းလဲလိုက်သည့် အလံသစ်များကို တနိုင်ငံလုံးအသုံးပြုနိုင်ရန် အခုရေ ၁ သန်းခန့် စတင် ချုပ်လုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အလံ ၁ သိန်း ခွဲကို အမှတ် ၁ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက ချုပ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ကျန်သည့် အရေအတွက်ကို တင်ဒါစနစ်နှင့် ခေါ်ယူပြီး ပုဂ္ဂလိက အထည်ချုပ်စက်ရုံများအား အပ်နှံမည်ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အတိုက်ခံခဲ့ရသော မေလ အတွင်းတွင် ဆန္ဒခံယူပွဲများ ကျင်းပ အတည်ပြုခဲ့ရာ ပြည်သူ ၉၂. ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းက ထောက်ခံခဲ့ကြောင်း စစ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
"SHOCK Shi-Tae" Campaign Song
RFA | အနှစ် ၂၀ အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ပေမဲ့ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ဝင်ရောက်ခွင့် ပေးမှသာ အများ လက်ခံ ယုံကြည်နိုင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်မယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Tomas Ojea Quintana က အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက် ဒီကနေ့ ပြောကြားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ တောမတ်စ် ကင်တားနား (ယာမှတတိယ) နှင့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ (တစည) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့တို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ ဒီကနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန်ည သန်းခေါင်ကျော်မှာ မစ္စတာကင်တားနားက ကိုယ်တိုင် အစီရင်ခံ တင်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး အစီရင်ခံစာသစ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ မရှိမဖြစ် အရေးပါတဲ့ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ် ဟောပြောခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ စုရုံးစည်းဝေးခွင့်နဲ့ လွတ်လပ်စွာ သင်းပင်းဖွဲ့စည်းခွင့် စတဲ့ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ပိုကန့်သတ်ထားတာ တွေ့ရတယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အာဏာပိုင်တွေက ကျူးလွန်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို စုံစမ်းပြီး အရေးယူဖို့ အရေးပါသလို မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ တာဝန်လည်း ရှိကြောင်း၊ အစိုးရက စုံစမ်း ဖော်ထုတ်ဖို့ ပျက်ကွက်ရင်၊ ဒါမှမဟုတ် စုံစမ်း ဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်း မရှိရင် ဒီတာဝန်ဟာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း အပေါ်မှာ ကျရောက်လာကြောင်း၊ ဒါ့ကြောင့် စစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့ လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှု မြောက်မမြောက် စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကုလသမဂ္ဂ ကော်မရှင်တရပ်ဖွဲ့ဖို့ နိုင်ငံတကာမှာ တာဝန်ရှိကြောင်းလည်း ဒီအစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ ဒီကနေ့ တင်ပြမဲ့ အစီရင်ခံစာသစ်မှာ ထူးခြားပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတွက် လေးနက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
(၁) ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ ကန့်သတ်တာတွေ ရှိနေပြီး အခြေခံ ခွင့်ပြုရမဲ့ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ချိုးဖောက်နေကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာ လွတ်လပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း မဟုတ်သလို နိုင်ငံရေးပါတီတွေအပေါ်မှာ အမျိုးမျိုး ကန့်သတ် ဖိနှိပ်ထားတာ တွေရှိနေကြောင်း။
(၂) မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသားထုတရပ်လုံးအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ပြစ်မှုမြောက်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတာ ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေအရ သိရှိပြီး ဒီအမှုတွေ တကယ်ဖြစ်မဖြစ် စုံစမ်းအရေးယူဖို့ ပထမဆုံး မြန်မာအစိုးရမှာ တာဝန်ရှိပြီး၊ မြန်မာအစိုးရက တာဝန်ပျက်ခဲ့ရင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ တာဝန်ရှိကြောင်း၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထောက်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနားရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ အခန်း ၅ ခန်းပါပြီး ပိုဒ်ခွဲ ၉၁ ခု ရှိပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရွေးကောက်ပွဲ အခင်းအကျင်း၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိစ္စ၊ တိုင်းရင်းသားအရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာဥပဒေ လေးစားလိုက်နာမှုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီနောက်မှ အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ နိဂုံးချုပ်နဲ့ တိုက်တွန်း တောင်းဆိုချက် ၅ ချက် ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာပါ ထူးခြားချက်တွေအကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွမ်းကျင်သူ ၃ ဦးနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး RFA မှ ကိုကျော်မင်းထွန်းက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
မောင်သြ | မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီး ကျင်းပဖို့ ရက်ပိုင်းလောက်ပဲ လိုပါတော့တယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးကို နအဖစစ်အစိုးရက ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲလို့ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် တကယ်တော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာ ဗိုလ်သန်းရွှေ ရွေးကောက်ပွဲလို့ ခေါ်ရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ဗိုလ်သန်းရွှေ လက်သပ်ကျောသပ် မွေးထားတဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ အမိန့်သြဇာခံ ပါတီလည်းဖြစ်၊ ဗိုလ်သန်းရွှေကိုယ်တိုင် နာယကကြီးအဖြစ် ပါဝင်ထားတဲ့ ပါတီလည်းဖြစ်တဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ အနိုင်ရရှိဖို့ ကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လို့ပါပဲ။
ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး စာရွက်များ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းတွင် ပျံ့နှံ့
သင်းသဇင်ခိုင် | ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်သည့် စာရွက်များကို ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းတွင် ဖြန့်ကျဲ ချထားသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်ဟု မျက်မြင် အမျိုးသမီး တဦးက ပြောသည်။
သူမက “ ကျွန်မတွေ့တာက အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီခန့်မှာ ကမ္ဘာအေး ဘုရားရှေ့က ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းမှာတွေ့ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း တချို့စာရွက်တွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ အတွက် ကောက်ယူလာခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
“ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူကသာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ပြဌာန်းပေးနိုင်သည်။ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများ သတ်ိရှိကြ။ လုပ်သင့်တာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ်ဆောင်ကြ။” ဟု ပါရှိပြီး တခြားတရွက်တွင်လည်း “ အာဏာရှင် ချယ်လှယ်သော ရွေးကောက်ပွဲ အလိုမရှိ။ ပြည်သူတိုင်း လုံးဝ မဲမပေးပါနှင့်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်သော ဒီမိုကရေစီ အရေး အမြန်ဆုံး ဖေါ်ဆောင်ပေး။ အမျိုးသားရေး အသိဖြင့် ဆက်လက် ဖြန့်ဝေပေးပါ။” ဟု ပါရှိကြောင်း သိရသည်။
“ ဘယ်အဖွဲ့ဖြန့်တယ်ဆိုတာတော့ အဖွဲ့ရဲ့ နာမည် မပါတော့ မသိဘူးလေ။ ရွေးကောက်ပွဲကို မကြိုက်တဲ့ သူတွေက လုပ်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မ အထင်တော့ ခုလို စာရွက်တွေ လမ်းပေါ်မှာ ၃၀၀ လောက်ရှိမယ် ထင်တယ်။ ပြန့်ကြဲနေပါတယ်” ဟု သူမက ပြောသည်။
အဆိုပါ အဖွဲ့သည် အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နှင့် ၁၇ နေ့များက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ၌ မဲမပေးရေး လှုပ်ရှားမှု တစ်ရပ်ကို ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ မြို့နယ် ၂၀ မြို့နယ်တို့တွင် အခြေပြု လှုပ်ရှား ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဗဒတ တပ်ပေါင်းစုတွင် သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီး၊ ၂၀၀၇ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ၊ ရွှေဝါရောင် မျိုးဆက်အဖွဲ့၊ New Generation၊ မြေလတ်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့ နှင့် ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ ဒီမိုကရေစီရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားနေကြသည့် ကျောင်းသားလူငယ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ပါဝင်ပြီး ၂၂ကြိမ်မြောက် ၈လေးလုံး နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်သည့် ၈ ရက် ၈လ ၂၀၁၀ တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
Posted by နော်မန် at 9:24 AM
အန်အယ်လ်ဒီကို တန်ပြန်သည့် I Vote လှုပ်ရှားမှု ရန်ကုန်၌ စတင်
ဝီရ|မဲသွားမပေးရေး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ)၏ လှုပ်ရှားမှု ကန်ပိန်းကို တန်ပြန် တိုက်ခိုက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် I Vote (မဲပေးမည်) လှုပ်ရှားမှု တရပ် ရန်ကုန်မြို့တွင် ယနေ့ စတင်ကြောင်း သိရသည်။
ဗဟန်းမြို့နယ်မှ အစိုးရ ဝန်ထမ်းတဦးက “ဒီမနက် တာမွေအဝိုင်းမှတ်တိုင်မှာ ကားကနေ ဆင်းပြီး လူငယ် ယောင်္ကျားလေး၊ မိန်းကလေးတွေ အုပ်လိုက် လမ်းဖြတ်ကူးသွားပြီး အဝိုင်းမီးပွိုင့်အထိ ဖြတ်လျှောက်သွားတာ တွေ့လိုက်တယ်။ ဟိုဘက်ရောက်တော့ လူစုခွဲလိုက်ကြတယ်။ ဝတ်စုံတူတွေဆိုတော့ လူတွေ သတိထားကြည့်လိုက်တော့မှ အိုင်ဗို့ (I Vote) စာတမ်းပါတဲ့ အဖြူရောင် အင်္ကျီတွေမှန်း သိတာ” ဟု ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းက ဦးဆောင်၍ လုပ်ဆောင်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိသေး၍ ရန်ကုန်ပြည်သူတို့အကြား ထင်ကြေးအမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်နေကြောင်း ပြည်တွင်းဂျာနယ်အယ်ဒီတာတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ဒါက ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေးပါတီတွေက လုပ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။ ဒီလှုပ်ရှားမှုက အာဏာပိုင်တွေကို ဆန့်ကျင်တာ မဟုတ်တော့ ကြောက်စရာလည်း မလိုဘူး။ အာဏာပိုင်တွေတောင် အားပေးချင် အားပေးဦးမယ်လေ” ဟု ရှင်းပြသည်။
“အသက် (၁၈) နှစ် ပြည့်ပြီးသော လူငယ်များ မိမိတို့လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း စာတမ်းထိုးထားသော တီရှပ်များ ဝတ်ဆင်၍ ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် သွားလာနေကြစဉ်” ဟူ၍ စစ်အစိုးရပိုင် ကြေးမုံသတင်းစာ၏ ဝဘ်ဆိုက်တွင် လှုပ်ရှားမှု ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြထားသည်။
ထိုလှုပ်ရှားမှုသည် စစ်အစိုးရ၏ ကျောထောက်နောက်ခံပြု အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ပါတီဝင်လူငယ်များက လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြည်တွင်းရှိ ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားတဦးက ထင်မြင်ချက်ပေးသည်။
၎င်းက “ရန်ပုံငွေ တောင့်တင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲမှာ ကြံ့ဖွံ့ တပါတီပဲ ရှိတယ်လေ။ ဒီကန်ပိန်းက အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ မဲမပေးရေး ကန်ပိန်းကို တန်ပြန်တာဆိုတော့ အဲဒီကြံ့ဖွံ့ လူငယ်တွေကလွဲရင် အခြားသော နိုင်ငံရေးပါတီတွေက လုပ်ဖုိ့ ငွေအား၊ လူအား၊ အချိန် ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
ယခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လှုပ်ရှားမှုသည် မဲရုံသို့ မသွားဘဲ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ရန် အန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင်တို့က နယ်အသီးသီးသို့ စည်းရုံးရေးဆင်းနေချိန်နှင့်လည်း တိုက်ဆိုင်ကြောင်း ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားတို့က ဆိုသည်။
ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်မဲကို အတင်းပေးခိုင်း၍မရကြောင်း၊ ပြည်သူတယောက်သည် မဲမပေးလိုပါက မဲမပေးဘဲ နေနိုင်ကြောင်း ရေးသားထားသည့် စာများနှင့်အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရုပ်ပုံပါသည့် လက်ကမ်းကြော်ငြာစာများလည်း အောက်တိုဘာ လဆန်းပိုင်းမှစ၍ ရန်ကုန်တွင် ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
ပြည်ပကလာမယ့် သတင်းသမားတွေနဲ့ လေ့လာသူတွေ မြန်မာရွေးကောက်ပွဲမှာ လက်မခံ
VOA | လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပတော့မယ့် မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်ငံတကာ လေ့လာ စောင့်ကြည့်သူတွေကို လာရောက် လေ့လာခွင့်နဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်တွေ လာရောက် သတင်းယူခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မသိင်္ဂီထိုက်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိုး။ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၀။AP
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ နိုင်ငံတကာ သံတမန်တွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ဖို့ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေကို ဖိတ်ကြားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိုးက ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်း သတင်းအယ်ဒီတာ တဦးက အခုလို ပြောပါတယ်။
ပဲရစ် အခြေစိုက် နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များ အဖွဲ့က အာရှရေးရာ တာဝန်ခံ ဗင်းဆင့် ဘရော့ဇဲလ်က အခုလို ပြောပါတယ်။
မြေသြဇာအဖွဲ့ မန္တလေး လှုပ်ရှားမှု ဓါတ်ပုံများ
2010 ရွေးကောက်ပွဲ အလိုမရှိ၊ ဖျက်သိမ်းပစ်၊ နအဖ ပြုလုပ်သည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဖျက်သိမ်းပေး ဆိုတဲ့ စာသားများ မန္တလေးမှာ ဖြန့် -
လူထု တရပ်လုံးအတွက် စတေးခံ
Posted by နော်မန် at 10:54 AM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အထူးအယူခံ ကြားနာ
၀ီရ| နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ဖောက်ဖျက်မှု ပြစ်ဒဏ်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အထူးအယူခံဝင်မှုကို ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးချုပ်၌ ယနေ့ ကြားနာခဲ့ရာတွင် အယူခံအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေဖြစ်သူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက “ဒီနေ့ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်တာကို ပြင်ဆင်ပေးဖို့ ကျနော်တို့ဘက်က အယူခံ တင်ပြတာကို ကြားနာဖြစ်တယ်။ ဒီတင်ပြခဲ့တဲ့အပေါ် ကျနော်တို့ဘက်က ကျေနပ်မှု ရှိပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဆက်လက် ကြားနာဖို့အတွက် တရားရုံးချုပ်ဆီက ဒီနေ့ တခါတည်း ဆုံးဖြတ်တာ မရှိသေးတော့ နောက်တပတ် မဟုတ်ရင် နှစ်ပတ်အတွင်း ပြန်ကြားနာမယ်လို့ ကျနော်တို့ဘက်က မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောကြားသည်။
Posted by MoeThwayNge at 7:14 AM
ပေါက်ပေါက် | ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (ကေအိုင်အို) ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်မတော် (ကေအိုင်အေ) ထောင်ထားသည့် မိုင်းနင်းမိပြီး ပြည်သူ (၂) ဦး သေဆုံးပြီး (၁) ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်း နအဖပိုင် သတင်းစာများ၌ ဖော်ပြမှုအပေါ် ကေအိုင်အိုအဖွဲ့က ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
အောက်တိုဘာ (၁၇) ရက် နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် ကေအိုင်အေ စစ်ရုံးချုပ်၏ကြေညာချက်တွင် မိမိတို့နယ်မြေဖြစ်သော နွားလပို့တောင်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အား စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ကေအိုင်အေသည် ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နှင့် လုံခြုံရေးအား ထိခိုက်စေမည့်လုပ်ရပ်များ လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက် လုံးဝမရှိပါကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
အောက်တိုဘာ (၁၅) ရက်ထုတ် နအဖသတင်းစာများတွင် ကေအိုင်အေ သောင်းကျန်သူများ ထောင်ထားသည့် မိုင်းအား နင်းမိပေါက်ကွဲသဖြင့် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ(၂) ဦး သေဆုံးပြီး (၁) ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ ဟူသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ ပင်းဘောကျေးရွာအုပ်စု ပင်းကြိုင် ကျေးရွာနေ ရွာသား (၅) ဦး ရွာအနောက်ဘက် (၁ဝ) မိုင်ခန့်အကွာ၊ ကချင်အထူးဒေသ (၂) နယ်မြေ၊ နွားလပို့ တောင်ပေါ်သို့ သွားရောက်စဉ် အောက်တိုဘာ (၁၃) ရက်၊ မွန်းတည့် (၁၂) နာရီခန့်အချိန်၌ နွားလပို့တောင်ထိပ်၌ ကေအိုင်အေ သောင်းကျန်းသူများ ထောင်ထားသည့် မိုင်းနင်းမိ၍ (၂) ဦးသေဆုံးပြီး (၁) ဦး ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ သတင်းဖော်ပြမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မိုင်းပေါက်ကွဲသည့်ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားနေရာ ကွဲလွဲနေကြောင်း ကေအိုင်အိုမှ ပြောခွင့်ရသူတဦြးုဖစ်သည့် ဗိုလ်မှူးကြီး ဆင်ဝါးက ပြောသည်။
၎င်းက “ဖြစ်တဲ့နေရာ မိုင်းကွဲတဲ့နေရာက ကွဲနေတယ်။ သတင်းစာမှာပါတာက ပင်းဘောရဲ့ အနောက်ခြမ်းမှာ၊ မိုင်းပေါက်တဲ့ဖြစ်စဉ်က အရှေ့ခြမ်းမှာဖြစ်တာ။ မိုင်းပေါက်တာ၊ လူသေဆုံးမှု ရှိတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ကြေညာချက်ထဲတွင် ကေအိုင်အေသည် ကန့်သတ်နယ်မြေသတ်မှတ်ကာ လုံခြုံရေးအရ လိုအပ်သောစခန်းအနီး ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် လုံခြုံရေးမိုင်းများ ထားရှိပါသည်။ ထိုသို့ လုံခြုံရေးမိုင်းများ ထားရှိခြင်းကိုလည်း ပြည်သူအများသိရှိစေရန် ကြိုတင်ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ သတိပေးစာ( ဆိုင်းဘုတ်) များဖြင့် ဖေါ်ပြထားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ထားပါသည်ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
ကေအိုင်အိုအဖွဲ့နှင့် ၁၉၉၄ ခုနှစ် အပစ်ရပ်စဲရေးပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် နအဖသတင်းစာများမှ ကေအိုင်အိုအား သောင်းကျန်းသူဟု သုံးနှုန်းဖော်ပြ ရေးသားလာခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ သုံးနှုန်းရေးသားမှုအပေါ် ကေအိုင်အိုက ယခု အချိန်တွင် မည်သည့်တုန့်ပြန်ချက်မျှ ပြုလုပ်ရန် အစီစဉ်မရှိကြောင်း ဗိုလ်မှူးကြီး ဆင်ဝါးက ပြောကြားသော်လည်း တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက် စစ်ရေးလေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇောကမူ ယင်းအသုံးအနှုန်းကြောင့် ကေအိုင်အိုနှင့် နအဖအကြား အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ပျက်ကာ နဂိုမူလအခြေအနေအတိုင်း ပြန်ရောက်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း နအဖဘက်မှ ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်သည်။
၎င်းက “ ဒီဟာက ၁၉၉၄ ခုနှစ်မတိုင်မီက အခြေအနေအတိုင်း ပြန်ရောက်သွားပြီဆိုတာ နအဖက ပြောလိုက်တာပါ။ တဖက်ကလည်း စစ်ပွဲအတွက် ခြိမ်းခြောက်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ အမှန်တော့ နှစ်ဖက်အကြား အဆက်အဆံတွေက အခု ဒီ မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူးအသစ် ရောက်လာကတည်းက စလို့ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီကြားကပဲ ကေအိုင်အို ရဲဘော်တွေကို ဖမ်းတာဆီးတာ လုပ်လာတယ် ”ဟု ပြောသည်။
ကေအိုင်အိုအား နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရန် သို့မဟုတ် လက်နက်စွန့်ရန် ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ (၁) ရက် နောက်ဆုံးထားပြီး နအဖဘက်မှ ရာဇသံပေးခဲ့သည်။ ကေအိုင်အိုအဖွဲ့က လူထုအစည်းဝေးနှင့် ကွန်ကရက် တရပ်ခေါ်ယူကာ သြဂုတ် (၃ဝ) ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ပြီး နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
ယင်းနောက်ပိုင်း ကေအိုင်အိုနှင့် နအဖအကြား ဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်နေသကဲ့သို့ မြို့ပေါ်သို့ ခရီးသွားလာသည့် ကေအိုင်အို တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား နအဖဘက်မှ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ မြို့ပေါ်ရှိ ကေအိုင်အို တပ်ဖွဲ့ မိသားစုဝင်တို့၏ နေအိမ်များအား ဧည့်စာရင်းစစ်ခြင်း၊ ကေအိုင်အိုတပ်ဖွဲ့ ထိန်းချုပ်ရာဒေသသို့ ရိက္ခာများသယ်ယူမှု ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နအဖနှင့် ကေအိုင်အိုအကြား ဆက်ဆံရေးပြတ်ကာ နအဖဘက်မှ တင်းကျပ်မှု ပိုမိုလုပ်လာနေချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ သောင်းကျန်းသူဟု ဖော်ပြလာမှုကြောင့် နှစ်ဖက်အခြေအနေ ပိုပြီးတင်းမာသွားစေနိုင်သည်ဟု အကဲခတ်များက ဝေဖန်ကြသည်။
Posted by MoeThwayNge at 7:11 AM
လမ်းခင်းမှုများ တ၀က်တပျက်ဖြင့် ရပ်နားထားရန် မြို့တော်ဝန် ညွှန်ကြား
NEJ| ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ခင်းပေးနေသော လမ်းများကို အပြီးသတ်မခင်းဘဲ တ၀က်တပျက်ဖြင့် ရပ်နားထားမည်ဟု သိရသည်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင် အမတ်အရေအတွက် မည်မျှရမည်ကို ခန့်မှန်းရန်ခက်နေသည့်အတွက် မြို့တော်ဝန်က ယင်းသို့ ရပ်ဆိုင်းခိုင်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာမှ လမ်းအင်ဂျင်နီယာတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးအတွက် ရန်ကုန်စည်ပင်က လုပ်ပေးရတာလေ။ လက်ရှိမှာ မြို့တော်ဝန်ကလည်း အမတ်လောင်းဖြစ်နေတော့ ရန်ကုန်အနေနဲ့ ပြည်သူတွေသဘောထားကို ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက် လမ်းတွေအပြီးသတ်မခင်းဖို့ လုပ်ထားတာ။ ဒါက မြို့တော်ဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်ပဲ” ဟု ပြောသည်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှ ရန်ကုန်မြို့နယ်များရှိ ရပ်ကွက်များအတွင်း လမ်းခင်းပြခြင်းဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြည်သူများအား မဲဆွယ်လျက်ရှိရာတွင် ပါတီဝင်အင်အား အရေအတွက်ကို ကြည့်ကာ လမ်းခင်းပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ပါတီဝင်အရေအတွက် မရသောလမ်းများကို ခင်းပေးခြင်းမရှိကြောင်း ထိုအင်ဂျင်နီယာက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးအောင်သိန်းလင်းသည် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှ ၀င်ရောက်အရွေးခံမည်ဖြစ်ပြီး မဲဆွယ်မှုပြုရာတွင် ၎င်းနှင့်ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မဲပေးမှသာ လမ်းခင်းပေးကြောင်း မြို့ခံများထံမှ သိရသည်။
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် သံသုမာလမ်းတွင် နေထိုင်သူ ပြည်သူတဦးက “အခုမြို့တော်ဝန်က ကျနော်တို့မြို့နယ်မှာ ပြိုင်မှာလေ။ ကြော်ငြာတွေတောင် ကပ်ထားပြီးပြီ။ အဲဒါ ကျနော်တို့လမ်းကို ပြင်ဖို့ မြို့နယ်က မြို့တော်ဝန်ကို ပြောကြတော့ ပါတီဝင် ဘယ်လောက်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ အရင်မေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ ပါတီဝင်တွေက သူ့ကိုပဲ မဲပေးရမယ်ဆိုတာ ပြောပြီးသား၊ ပြည်သူတွေက ပါတီမ၀င်ချင်ဘူးဆိုတော့ လမ်းမခင်းတော့ဘူး။ အခုတော့ လမ်းပေါ်က အပေါက်တွေကို စည်ပင်က ဖာထေးပေးနေတာလောက်ပဲရှိတယ်။ ကျနော်တို့ လမ်းမှာက လိုင်းကားတွေပြေးတော့ အပေါက်တွေများပြီး ပိုပျက်တာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
အချို့မြို့နယ်များတွင် လမ်းတချို့ကို ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပေးနေသော်လည်း တ၀က်သာ ခင်းထားသေးကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံများက ပြောသည်။
ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းတွင်နေထိုင်သူတဦးက “ ကျနော်တို့ ကျောက်တံတားမြို့နယ်မှာ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း အထက်ဘလောက်ကို ကွန်ကရစ်ခင်းတယ်၊ အခုတ၀က်ပြီးပြီ၊ နောက်တ၀က်ကတော့ ဘယ်တော့လဲမေးတာ မသေချာသေးဘူးတဲ့” ဟု ပြောသည်။
တ၀က်ခင်းလမ်းများတွင် မော်တော်ယာဉ်အသွားအလာ အခက်အခဲရှိသောကြောင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး “ ကျနော်တို့ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းကတော့ အဆိုးဆုံးပဲဗျာ၊ နေ့လယ်ကစပြီးတော့ ဈေးက တမျိုးဆိုတော့ ပိုဆိုးတယ်၊ ဈေးသည်တွေကလည်း ဟိုဘက်ဒီဘက် ရောင်းလိုက်၊ လမ်းကလည်း တ၀က်ပဲပြီးသေးတော့ တော်တော်လေးကို ဆိုးနေတယ်” ဟုလည်း ၎င်းကပြောသည်။
ရန်ကုန်စည်ပင်မှ ၀န်ထမ်းများမှာလည်း စည်ပင်အလုပ်ကို မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ ကြံ့ဖွံ့အလုပ်ကိုသာ လုပ်နေရသည့်အတွက် မြို့တော်ဝန်ကို စိတ်ပျက်နေကြကြောင်း သိရသည်။
စည်ပင်မှ အင်ဂျင်နီယာတဦးက “မဲဆွယ်ဖို့သွားတာကိုလည်း လိုက်ရတယ်ဗျာ၊ လမ်းခင်းနေရင် စည်ပင်ယူနီဖောင်းနဲ့၊ စည်းရုံးရေးဆင်းတာကိုလိုက်ရင် ကြံ့ဖွံ့ယူနီဖောင်းနဲ့၊ အ၀တ်တွေကို နေရာအလိုက် ပြောင်းပြီးတော့ လုပ်နေရတာ ကြာတော့ စိတ်ပျက်မိတာအမှန်ပဲ” ဟု ပြောဆိုသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် မြို့နယ်ပေါင်း (၄၅) မြို့နယ်ရှိပြီး ယင်းမြို့နယ်များအနက် လွန်ခဲ့သော နှစ်လခန့်က မြို့တော်စည်ပင်မှ ခင်းပေးခဲ့သည့်လမ်းများသည် အဆုံးတိုင် ပြီးစီးမှုမရှိသေးသည်က များကြောင်း သိရသည်။
“ကျမတို့ ပုဇွန်တောင်၊ ရေကျော်လမ်းမကြီးက လမ်းကိုလည်း ကွန်ကရစ်ခင်းနေတာ တ၀က်ပဲပြီးသေးတယ်။ ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး၊ အဲဒီလမ်းကလည်း ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦးက ပုဇွန်တောင်မှာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီက ၀င်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီး အသံတွေ ထွက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှ ခင်းတာ၊ အခုတော့စည်းရုံးရေးတွေ ဆင်းနေတာတွေ့တယ်၊ လမ်းကတော့မပြီးသေးဘူး” ဟု ပုစွန်တောင်ဈေးတွင် ဈေးရောင်းသည့် အမျိုးသမီးကြီးတဦးက ပြောသည်။
Posted by MoeThwayNge at 7:02 AM
မကွေး အက်ဖ်စီ ဟု အမည်ထွင်သော ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်
အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ | မြန်မာပြည်တွင်းရှိ အစိုးရ ဌာနများနှင့် ကုမ္ပဏီများရှိ ကွန်ပျူတာ များတွင် မကွေး အက်ဖ်စီ ဟု အမည်တွင်သော ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်များ ပျံ့နှံ့လျှက် ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်၏ တိုက်ခိုက်မှု ပမာဏကိုမှု အသေးစိတ် မသိရှိ ရသေးပေ။ တိုက်ခိုက် ခံရသူများ၏ ပြောစကားများ အရ ကွန်ပျူတာ အတွင်းဖိုင်များအား ဖျက်ပစ်ကြောင်းနှင့် ဝင်းဒိုးစ် ၏ desktopရှိ start menuနေရာတွင် မကွေးအက်ဖ်စီ စာတမ်းသာ တွေ့ရတော့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ Virus အတိုက်ခိုက် ခံရတာ အများစုဟာ .exe ဖိုင်တွေကို အလွယ်တကူ ဖွင့်မိလို့ ဖြစ်တာ အများဆုံးပါ။ Virus နံမည်က mgy.exe ပါ။
mgy.exe Virus တိုက်ခိုက် ခံရသော ကွန်ပျူတာသည် ..
Memory Stick များတွင်းမှ Folder များပျောက်သွားကာ ထိုပျောက်သွားသော Folder များ၏ အမည်များဖြင့် .exe File များ အစားထိုး ဝင်ရောက် နေခြင်း။
Folder Option၊ Taskmanager ပျောက်သွားခြင်း။
cmd.exe ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် ချက်ချင်း ပြန်ပိတ်သွားခြင်း။
.vbs script များ Run ၍ မရခြင်း။
Desktop ၏ ညာဘက် အောက်ထောင့် ( အချိန် ဖော်ပြသော နေရာ ) တွင် အထက်ပါ ဖော်ပြထားသော Magway FC ပုံ မကြာခဏ ပေါ်လာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါသည်။
mgy.exe Virus တိုက်ခိုက်ခြင်း ခံနေရပါက ..
ကွန်ပျူတာတွင် ရှိသော AntiVirus ကို ခေတ္တ ပိတ်လိုက်ပါ။
Virus ကို ဖယ်ရှားခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် System ကို Restart ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည့် အတွက် လုပ်လက်စ အလုပ်များ ရှိပါက Save ပြုလုပ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
Virus ဝင်ရောက်ခြင်း ခံထားရသော Memory Stick များကို ကွန်ပျူတာတွင် တပ်ဆင်ထားပါ။
mgy Virus Removal.exe ကို Run လိုက်ပါ။
System Restart ဖြစ်၍ ပြန်လည် တက်လာသည့် အချိန်အတွင် mgy.exe Virus သည် သင့် ကွန်ပျူတာတွင်းနှင့် Memory Stick များတွင်းမှ ရှင်းလင်းပြီး ဖြစ်သွားသည်ကို တွေ့ရ ပါလိမ့်မည်။
Avast AntiVirus အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် Avast ၏ နေရာကို Virus မှ နေရာ ဝင်ရောက် ယူသွားသဖြင့် Avast ကိုပြန်လည် ထည့်သွင်း ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
virus file များရှာရန် command တစ်ကြောင်းသာ အဓိက လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Made in Myanmar virus တွေပေါ့။ taskmanager , folder options , registry ပျောက်နေရင်တော့ virus ၀င်တာသေချာပါပြီ။ start > run > cmd ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။ command prompt ထဲမှာ cd\_ လို့ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။command prompt မှာ c:\_ လို့ပေါ်ရပါမယ်။နောက်တစ်ခုရိုက်ရမှာက dir/ah *.exe /s/p/b လို့ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။ virus ရဲ့ source file များ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အခု နာမည်ကြီး နေတဲ့ Loikaw , Funny , chrome , mgy.exe တို့ကို စမ်းပြီးပါပြီ။ virus file အကုန်လုံး တွေ့ပါတယ်။ ဒီ virus file တွေရဲ့ process ကို kill ပြီးမှ သတ်လို့ ရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် process explorer software နဲ့ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ download လုပ်လိုက်ပါဦး။ command prompt မှာပေါ်တဲ့ virus file name က process explorer မှာပေါ်ရင် process ကို kill ပြီးvirus ကိုသတ်ပါ။ ဒီ command လေးရှိတော့ virus file ကို အလွယ်တကူ ရှာပြီး သတ်လို့ရတာပေါ့။ အဆင်ပြေပါစေနော် .. ..
File တွေ ဖျက်တာ ကတော့ del filename /s/f/a ပါ။ e.g del chrome.exe /s/f/a ပါ။ s ဆိုသည်မှာ file ရှိတဲ့ folder ခေါ် သူ့ရဲ့ sub-folder တွေပါ ဖျက်တာပါ။fကတော့ force deleting ပါ။aကတော့ attrib လုပ်ထားတဲ့ file တွေကို ဖျက်တာပါ။aထည့်လိုက်ခြင်းဖြင့် hidden , read only ,system တို့ကို ဖျက်လို့ ရပါတယ်။ attrib chrome.exe -s -h -r ဆိုပြီး လုပ်စရာမလိုပါ။ တစ်ခါတည်း ဖြတ်ပစ်တာပါ။
ir/ah *.exe /s/p/b စစ်လို့ ပေါ်လာတိုင်း virus လို့ ပြောလို့မရပါ။ virus name နဲ့ process explorer မှာ ပြတဲ့ name နဲ့ တိုက်ကြည့်လို့ တွေ့မှသာ virus ပါ။ eg. mgy virus ၀င်နေလို့ ရှာမယ် ဆိုပါစို့ ။ cmd မှာ dir/ah *.exe /s/p/b လို့ ရိုက်ပါ။ mgy.exe ပေါ်နေ ပါလိမ့်မယ်။ process explorer ကိုဖွင့်ပါ။ mgy.exe အလုပ်လုပ် နေတာကို ပြနေပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းအတိုင်း တခြား virus များကို ရှာဖွေ နိုင်ပါတယ်။ dir/ah *.exe /s/p/b လို့ စစ်လို့တွေ့တဲ့ file များကို အကုန် ဖျက်လို့ ရပါတယ်။ ဒါဆို ပို စိတ်ချ ရတာပေါ့။ တချို့ virus ကိုက်လို့ command prompt ခေါ်လို့ မရရင် windows ကို restart လုပ်ပါ။ post လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ F8 key ကို ဆက်တိုက် နှိပ်ထားပါ။ Safe Mode options ပေါ်လာရင် Safe Mode with command prompt ကို ရွေးပါ။ command prompt ပေါ်လာရင် dir/ah *.exe /s/p/b လို့ ရိုက်ပါ။ တွေ့သမျှ file ကို ဖျက်ပါ။ သူ့ရဲ့ process ကို သတ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ တစ်ခါတည်း delete လုပ်ပါ။ နောက်ပြီး command prompt မှာ msconfig လို့ ရိုက်ပါ။ startup Tab ကို သွားပြီး ခုနက command prompt မှာ ပေါ်တဲ့ file များကို အမှန်ခြစ် ဖြုတ်ပါ။ ဒါဆိုရင် virus ပါ တစ်ခါတည်း သတ်နည်းပါ။ s/p/b ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သာမက ကျနော် တစ်ကြောင်းလုံးကို ရှင်းပြပါမယ်။
ir/ah = dir က windows ရဲ့ File & Folder တွေကို ခေါ်ကြည့်တဲ့ နေရမှာ သုံးတာပါ။ ah ဆိုတာကတော့ attrib လုပ်ထားတဲ့ file တွေပါ။ attrib file ဆိုတာ Read only , Hidden , System file တွေကိုပြောတာပါ။ eg. boot.ini // virus file တွေက boot.in file လိုပဲ ttrib file တွေပါ။
.exe = *.exe ကတော့အရှေ့က * က file name ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်ကို ပြောတာပါ။ ဒါပေမဲ့ exe file ပဲဖြစ်ရမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ exe ပါ /s = /s ကတော့ သူ့ရဲ့ ဆင့်ပွား Folder တွေထဲက file တွေကို ကြည့်တာပါ။ eg. c: ရဲ့ ဆင့်ပွား Folder က file ကြည့်ရင် windows system32\_cmd.exe ပါ။ cmd.exe က c: ရဲ့ ဆင့်ပွား folder က file ပါ။
MGY Virus ကို အလွယ် သတ်နည်း
အရင်ဆုံး MGY Virus ၀င်ရင် ဘယ်လို လက္ခဏာဝင်လည်း ဆိုတာကိုတော့ အသိတော့ အသိသာကြီးပါ။ ထုံးစံအတိုင်း Task Manager, Folder Option ပိတ်သွားတယ်။ Start Menu က Start နေရာမှာ MagwayFC ဆိုပြီး ပြောင်းသွားတယ်။ Start Menu ထဲက My Computer Link တွေ Control Panel Link တွေရဲ့ icon က မကွေး FC ရဲ့ Logo တွေ ပြောင်းသွား ပါတယ်။ txt, bat, com ဖိုင်တွေရဲ့ icon တွေလည်း မကွေး FC ရဲ့ Logo တွေ ပြောင်းသွား ပါတယ်။ ပြီးတော့ Welcome to Magway FC ဆိုပြီး အနီရောင် နောက်ခံနဲ့ box လေးက Taskbar ရဲ့ ညာဘက်မှာ အမြဲတမ်း ပေါ်လာပါတယ်။ Folder တွေ တစ်ခုမှ ဖွင့်မရတော့ဘူး။ ဘယ် Software မှ တင်လို့ မရတော့ဘူး။ နောက်ပြီး Start > All Programs ထဲက Program တွေလည်း တစ်ခုမှ မရှိတော့ဘူး။ Program တွေကို ဖျက်လိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ .lnk တွေကို hidden လုပ်လိုက်တာပါ။
အဲဒီလိုတွေ အရမ်းများတာမို့ ဗိုင်းရပ်စ် သတ်ပြီးရင် Windows ပြန်တင် လိုက်တာက အမြန်ဆုံးနည်းပါ။ တစ်ခု ရှိတာက မကွေးကို မသတ်ပဲနဲ့ Windows ပြန်တင်လည်း ခဏပါပဲ။ မကွေးက ပြန်ဝင်မှာပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သူက D: တွေ E: တွေထဲမှာပါ ၀င်ကုန်တာကိုး။ ဒါကြောင့် သတ်ပြီးမှ တင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ လိုင်စင် Windows ကြီးဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ရေးထားသလို အသေးစိပ် သတ်ပြီး ပြင်ပေးမှ ရပါမယ်။ မဟုတ်ဘဲနဲ့ လိုင်စင် Windows ကြီး ဖျက်ပြီး ခိုးကူး Windows ကြီး ပြန်တင်ပေးရင်တော့ ဘယ်ကောင်းပါ့ မလဲ။ ဒါကြောင့် လိုင်စင် Windows ဆိုရင်တော့ ထစ်ခနဲရှိ Windows ပြန်တင် ရတာမျိုးတော့ လုပ်မရတော့ဘူးပေါ့။ မသကာ Recovery လုပ်တာက အလွန်ဆုံးပဲ။
မကွေးဝင်တာနဲ့ တပြိုင်နက် ကွန်ပျူတာကို မသုံးပါနဲ့တော့။ ချက်ချင်း ပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Hiren နဲ့ Boot တက်ပါ။ အဲဒီထဲက Mini Windows XP နဲ့ boot တက်ပါ။ Mini Windows XP တက်လာရင် C: ထဲက mgy.exe, autorun.inf တွေကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ရှိပြီးသား Folder တွေနဲ့ နာမည်တူ .exe ဖိုင်တွေ၊ .lnk.exe ဖိုင်တွေ အကုန်ဖျက်ပါ။ C:\_Windows ထဲက mgy.exe ကိုလည်း ဖျက်ပါ။ System32 ထဲက 27 နဲ့ စတဲ့ Folder နဲ့ mgy.exe ကိုလည်း ဖျက်ပစ်ပါ။ C: ထဲက System Volume Information နဲ့ Recycler, Recycled တွေကိုလည်း ဖျက်ပါ။ တခြား D: တွေ E: တွေထဲက mgy.exe ကို ရှာဖျက်ပါ။ မကွေးက ပွားလိုက်တဲ့ .exe ဖိုင်တွေဟာ 15.6 MB တွေ ချည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မကွေးနဲ့ သူ့အပေါင်းအပါတွေကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပြီးသွားရင် HDD ထဲက Windows ပြန်တက်လိုက်ပါ။ RRT နဲ့ ပိတ်ထားတာ တွေကို ပြန်ဖွင့်မယ်။ HijactThis နဲ့ Autorun တွေ ဖြုတ်မယ်။ Software တွေ တင်မရ အောင် လုပ်ထားတာကို Registry ထဲမှာ DisableMSI key ရှာပြီး Value ကို0ပေးလိုက်ပါ့မယ်။
Icon တွေကို Windows Default အတိုင်း ပြန်ဖြစ်စေဖို့ အတွက် Tune up သုံးရင် ရပါတယ်။ မကွေးက shell32.dll အစား sxell32.dll အစားထိုး လိုက်တာမို့ အဲဒီလို ဖြစ်သွားတာပါ။
နောက်ပြီး မကွေး ဖျောက်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေက Super Hidden တွေဖို့ Folder Options က Show Hidden နဲ့ဆို မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ XYplorer နဲ့တော့ မြင်ရမယ်။ ပြီးရင် XY နဲ့ attribute တွေဖြုတ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွား ပါလိမ့်မယ်။ Start Menu ထဲက ပျောက်နေတာတွေကိုလည်း XY နဲ့ပဲ ပြန်ဖော်လို့ ရပါတယ်။
Start Menu မှာ MagwayFC ဖြစ်နေတာ ကိုတော့ Resource hacker ကို အသုံးပြုပြီး http://www.theeldergeek.com/change_text_on_xp_start_button.htm မှာ ရေးထားတဲ့ အတိုင်း Start ဆိုပြီး ပြန်ပြောင်း လိုက်ပါ။
MgyVirusCleaner မှ မရှင်းလင်းနိုင်သည်မှာ virus မရှိတော့သော်လည်း software များကို install လုပ်၍မရတော့ခြင်းဖြစ်သည်။ OK ၏ MgyVirusCleaner သုံးပြီး၍ Virus မရှိတော့လျှင် အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်ပါ။
Local Security Policy ထဲတွင် Software Restriction Policies ကို Right-click နှိပ်၍ “New Software Rectriction Policies” ကို ရွေးနှိပ်ပါ။
Software Restriction Policies ကို click တစ်ချက် နှိပ်လိုက်လျှင် ညာဘက်ခြမ်းတွင် Enforcement ကိုတွေ့ရမည်။
အဆင့်( ၂ )
Registry Editor ကိုဖွင့်ပါ။ (Windows XP အတွက် Start > Run တွင် regedit ဟုရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။ Windows Vista or7အတွက် Start နှိပ်ပြီးသည်နှင့် regedit ဟု ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။)
ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှ HKEY_LOCAL_MACHINE\_Software\_Policies\_Microsoft\_Windows\_Installer အထိ အဆင့်ဆင့် Double-click နှိပ်ပြီး ဖွင့်သွားပါ။ ညာဘက်ခြမ်းမှ DisableMSI ကို Double-click နှိပ်ဖွင့်ပြီး 1 ဖြစ်နေသည်ကို0ဟုပြင်လိုက်ပါ။ OK နှိပ်ပါ။ Registry Editor ကိုပိတ်ပြီး စက်ကို Restart ပြန်လုပ်လိုက်လျှင် Software များ Install ပြန်လုပ်၍ရသည်ကို တွေ့ရပါမည်။
source by : http://malaysiammbloggers.blogspot.com
မမခင်| စစ်အစိုးရရဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဟာ ညီလာခံအတုကလာတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အတုကြီးဆိုတာတော့ လူတိုင်းသိနေပြီးသားပါ။ လူတိုင်းသိပြီးသားဆိုပေမဲ့ သမာဒိဌိ – အမြင်ကြည်လင်သူတိုင်း သိတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ အမြင်မှား အာရုဏ်မှား အတွေးမှားများနဲ့ မောဟတိမ်သလ္လာဖုံးနေသူများကတော့ အတုကို အစစ်ထင်နေချင် နေကြမှာပါဘဲ။
ဘုန်းကြီးရိုက်တဲ့ ကြံ့ဖွတ်လည်း မဲမပေးချင်ဘူး။ တိုင်းပြည်ကို လူမွဲဇာတ်သွင်းသွားတဲ့ မ.ဆ.လအဟောင်း တစညလည်း မဲ မပေးချင်ဘူး။ အခု ခမောက်ဆိုတာ ဘာလဲ။ ခွပ်ဒေါင်းကရော၊ ၀ံသာနုဆိုတာက ရော။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အတူတူတဖွဲ့ထဲဘဲ ဆိုတာကရော——။
Posted by နော်မန် at 7:54 PM
NLD YOUTH (LA) MALAYSIA ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းကြောင်း ထုတ...
Category II အဆင့်ရှိ အားကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တ...
မြန်မာနိုင်ငံမှ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ အထူ...
နိုင်ငံတော်အလံသစ်တင်ပြီး အလံဟောင်းကို မီးရှို့ဖျက်ဆ...
လူ့အခွင့်အရေးအစီရင်ခံစာသစ်တွင် ထူးခြားသော အချက်မျာ...
ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး စာရွက်များ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလ...
ပြည်ပကလာမယ့် သတင်းသမားတွေနဲ့ လေ့လာသူတွေ မြန်မာရွေး...
၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ဂုဏ်ပြုမေ...